Yonga Amandla Ekhaya - Isikhungo se-EcoTechnology
Yonga Amandla EkhayaUSteven Hoffman2021-06-15T13:26:30-04:00
Yiba Nokunethezeka Kakhulu
Ukuhlolwa Kwamandla Ekhaya
Yenza Ikhaya Lakho Lisebenzise Amandla Kahle
Yakha Ikhaya Lokusebenza Eliphezulu
ivula efasiteleni elishaLUSIZA UHlelo Lwempompo Yokushisa
IMisa Londoloza Amakhasimende
1-866-527-7283ivula okokudayila kwefoni
IMisa Save inikeza ukuhlolwa kwamandla emali okungabizi izindleko ukusiza abaninikhaya benze ngcono izindlu ezonga imali, ugesi kanye nophethiloli wokushisa. I-CET iqhuba izinsiza zamandla kaMisa Save zeBerkshire Gas eWestern Massachusetts. Isazi sethu ivula efasiteleni elishaAbasebenzi abaqinisekiswe yi-BPI izokusiza ekuboneni nasekubekeni phambili ukuthuthuka okungabizi kakhulu ekhaya lakho futhi ikwazise ngezaphulelo nezikhuthazo zokwenza ukuthi ikhokhwe kangcono. Ukwenza ikhaya lakho longe amandla kulula kunanini ngaphambili ngezikhuthazo ezinhle ezivela kwaMisa Londoloza:
Yonga kuze kufike ku- $ 2,000 ekuvuseleleni amandla wasekhaya njengokufakwa nokufakwa uphawu komoya
0% inzalo ye-HEAT Loan (kufika ku- $ 25,000 - bona ivula efasiteleni elishaIMassSave.com ngokunikezwa kwakamuva)
Abanini bemizi abakulungele ukubolekwa imali bangaxhasa ngezimali izithuthukisi ezinconyiwe njengokufakwa, ukuvalwa komoya, ukushisa okuphezulu kanye nezinhlelo zamanzi ashisayo, amawindi namanzi ashisayo elanga. Isinyathelo sakho sokuqala sokufanelekela ukuthola izikhuthazo ukubhalisela iMisa Gcina ukuhlolwa kwamandla kagesi okungabizi.
Ifomu Lokuxhumana Namandla Wasekhaya
Gcwalisa ifomu ukuze uqalise.
Noma yini ofuna siyazi?
1-888-333-7525ivula okokudayila kwefoni *
Uhlelo lwe-HELPS (Home Energy Loss Prevention Services) luhanjiswa yiNkampani kaMasipala waseMassachusetts Electric Wholesale Electric (MMWEC).
I-HELPS ihlinzeka ngemfundo yamandla, ukuhlolwa kwamandla emakhaya, usizo ngokuthuthukiswa kwamandla kagesi, kanye nezaphulelo zensiza ye-ENERGY STAR kumakhasimende asetshenziswayo emadolobheni alandelayo:
Ashburnham, Boylston, Chicopee, Groton, Holden, Holyoke, Hull, Ipswich, Marblehead, Paxton, Peabody, Princeton, Russell, Shrewsbury, South Hadley, Sterling, Templeton, Wakefield, futhi West Boylston
Ukufaneleka kokusebenza kahle kwamandla ekhaya kungafaka:
Ukuvalwa komoya nokufakwa
Imishini yokushisa ephezulu, yokupholisa neyokushisa okuphezulu
Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa
Amaphrojekthi amasha wokwakha nokuvuselela amathumbu
I-Wi-fi enezindleko zokuhlala emotweni
Funda mayelana noHlelo Lokusiza Impompo Yokushisa lapha.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nalokho okusizwa idolobha ngalinye le-HELPS, sicela uvakashele munihelps.org.
* Amakhasimende wePeabody Municipal Light Plant (PMLP), sicela ushayele ku-978-531-5975 ukuhlela ukuhlolwa kwamandla kagesi ekhaya.
Noma ucisha amandla akho noma ufaka uhlelo lwakho lwe-PV, ukukhetha amandla okuvuseleleka kwenza amagxathu amakhulu ekwehliseni i-carbon footprint yakho.
ivula efasiteleni elishaShayela Okuhlaza- Thola imoto kagesi ehlisiwe
ivula efasiteleni elishaLuhlaza i-Electric Bill yakho - Yenza ukushintsha okulula ugesi oluhlaza
XHUMANA NATHI ngamandla avuselelekayo:
Ucingo / Umbhalo: 413-341-0418ivula okokudayila kwefoni Email: ivula efasiteleni elishacet@cetonline.org
Wonke amakhaya angonga amandla futhi anethezeke kakhudlwana. Ukwenza ikhaya lakho lisebenze kahle futhi kuzokongela imali kusikweletu sakho sikagesi inyanga ngayinye!
ivula efasiteleni elishaIzeluleko Zesimo Sezulu
Hlela Ukuhlolwa Kwezamandla Ekhaya
I-CET isiza ekwakheni nasekuklanyeni ochwepheshe ukuklama nokwakha amakhaya nezakhiwo zemikhaya eminingi ezihlangabezana namazinga anqenqemeni anamuhla okusebenza. Funda kabanzi mayelana nokuthi singakusiza kanjani.
ivula efasiteleni elishaIzinsiza Zokwakha Okusezingeni Eliphezulu
IMisa Londoloza, NYSERDA, Nika amandla i-CT
ivula efasiteleni elishaIzinhlobo Zephrojekthi
Izakhiwo ezingezona zokuhlala
XHUMANA NATHI mayelana nokwakhiwa okuphezulu:
Ucingo / Umbhalo: 888-452-8805ivula okokudayila kwefoni Email: ivula efasiteleni elishacet@cetonline.org